ALAOTRA : Nanao ny tatitra momba ny fanatanjahantena ny Talem-paritry ny Tanora
Dinika narahina ady hevitra no nentin’ny Talem-paritry ny Tanora sy ny fanatanjahantena nandravahana ny tatitra momba ny asa izay efa vitany sy ny mbola hotanterahiny eo amin’ny fitantanana ny foibem-paritra izay sahaniny. 3 mai 2017
Isan’ny nambaran’i Toavina Talem-paritry Tanora sy ny fanatanjahantena Alaotra Mangoro nandritra io fotoana io, fa isan’ny dingana vita ny nahatafatsangana ireo sampam-panantanjahantena rehetra aty Alaotra Mangoro niainga avy any amin’ny seksionina ka hatrany amin’ny ligy, na dia nahitana olana ihany aza ny sasany. Isan’ny nahitana ny olana ny baolina lavalava sy ny basket ball, hoy izy, saingy rehefa misy ny ady hevitra tsy maintsy voaravona izany.
Azo porofoina amin’ny alalan’ny fizotran’ireo fifaninanana isan-karazany izany rehetra izany, hoy izy, toy ny nahavitan’ny ligim-paritry ny basket ball ny fifaninanana teo amin’ny sokajy N.1.B sy ny fifaninanana teo amin’ny taranja fototra atletisma ary efa mandeha ihany koa ny an’ny baolina kitra amin’izao fotoana izao.
Nanentana ny rehetra izy mba hifanome tanana eo amin’ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena aty Alaotra Mangoro.